UKeet uthokozile ngokuphinde asebenze noTinkler kwiCitizens
July 5, 2021 July 5, 2021 Impempe.com
U-Eric Tinkler noDarren Keet
Unozinti omusha weCape Town City, uDarren Keet, uthi uyakujabulela kakhulu ukujoyina leli qembu nokubuyela ekhaya ukuzodlala ibhola elikhokhelayo.
UKeet ungunozinti onamava kakhulu kanti isikhathi esiningi usichithe phesheya kwezilwandle edlalela amaqembu aseBelgium.
Kuleli ugqame kakhulu edlalela iBivest Wits abuyele kuyona amahlandla amabili. Ngaphandle kwalokho, udlalele iKV Kortrijk yaseBelgium, ahlale kuyona kusukela ngo-2011 kwaze kwaba ngu-2016, wadlala imidlalo engu-130. Uke wathi qu nakwi-OH Leuven yakhona eBelgium adlale kuyona ngo-2019 kwaze kwaba ngu-2020.
Ngesizini edlule ubesiza iCape United adlale kuyo umdlalo owodwa kodwa kuyacaca ukuthi ubezama ukugcina ewumqemane kuleli qembu. NakwiBafana Bafana ayaziwa futhi amagalelo akhe njengoba egqoke imibala yeqembu lesizwe amahlandla angu-12.
“Ngijabule kakhulu ukujoyina iqembu (iCape Town City). Ngicabanga ukuthi kuzoba yiminyaka enenjabulo kakhulu kimina. Ngizalelwe eKapa, ngakhulela eKapa kodwa ngidlale ibhola elikhokhelayo ngaphandle kwaseKapa.
“Ngijabule ngokubuya ngiphinde ngibe ngowaseKapa futhi, kwiCape Town City,” kusho uKeet oneminyaka engu-31.
“ICape Town City yiqembu elihlale lifuna ukuwina izindebe, ngakho ngijabule kakhulu ngokubambisana esizoba nakho nayo.
FUNDA NALA: Yehlulekile imizamo yeSundowns yokuhlwitha uNgcobo kwiChiefs
“Ngizozama ukuzinikela masonto wonke ukuze iqembu lizuze lokho elizibekele khona. Ngikubheke ngabomvu ukuphinde ngisebenze nomqeqeshi u-Eric Tinkler (ojica iCitizens).
“Sike sasebenza noTinkler ngesikhathi eseyiphini kwiBidvest Wits. Ngiyakujabulela ukuthi sizovuselela lobo budlelwano ngoba saba nempumelelo kudala. Kungaba mnandi ukukuphinda lokho eKapa kwiCape Town City.
“Ngikulangazelele ukuhlangana nabantu abasha nokusebenza nabadlali esengike ngadlala nabo kwiBafana phambilini. Kuzoba yinto entsha kimina kodwa ngikulangazelele konke,” kuphetha uKeet.
Previous Previous post: UZinnbauer akakabuyi kodwa iPirates ibuyela ejimini
Next Next post: USeema ubona kulula ukuqhubeka la okugcine khona uNcikazi kwi-Arrows